Wax garad ku suga Gobolka Gedo oo ku hoowlan Hakinta xiisado colaadeed oo ka taagan gobalkaasi. « Gedonews Media Network
« Kidnappers of 2 aid workers surrounded in north Somalia
Xaflad balaran oo ka dhacady shalay xarunta Idaacada cusub ee Horseed ee degmadaa Baardheere »
Wax garad ku suga Gobolka Gedo oo ku hoowlan Hakinta xiisado colaadeed oo ka taagan gobalkaasi.
GEDONEWS MEDIA CENTER Bardhere:ergo nabad raadin ah oo shalay ka ambabaxay magaalada Baardheere ayaa xalay waxaa ay gaareen deeganada garileey iyo daara salaam oo ka wada tirsan gobalka Gedo si ay u hakiyaan xiisado ka aloosanaa labadii maalin ee ugu danbeeyay.
Ergadan ayaa isugu jira odayaal dhaqameed, nabadoono,maamul,saraakiil iyo xubno kale oo ka tirsan deegaanka waxaana ay gaarayan ilaa 9 xubnood oo si weeyn looga qadariyo deegaanada ay ku baxeen.
Xaladahan colaadeed ee ka soo cusboonaaday deeganadaasi ayaa ka danbeeysay kadib markii ay ku soo bateen maleeshiyooyin aan cidi ka amar qaadan oo dhibaatooyin kala duwan ku haya gaadiidka iyo dadka taasoo sababta dhimasho iyo dhaawac soo gaara dadka rayidka ah.
Falkii ugu danbeeyay ee ay geeysteen maleeshiyooyinkaasi waxaa maalinimadii doraad deegaanka daara salaam ee isla gobolka Gedo uu ugu geeriyooday 2 ruux halka 3 kale uu dhaawac culusi uu ka soogaaray kadib markii maleeshiyooyinkaasi iyo ilaalada gaari waday qaad ay rasaas isku weeydaarsadeen bartamaha deegaankasi taasoo ayan jirin cid loo qabtay dilka dadkaasi.
Col:Cabdi Bare Cabdi oo ka mida masuuliyiinta hor keceeysay ergada nabadeed ee ka timid degmadad Baardheere ayaa GEDONEWS U sheegay in muhiimada ay u tageen deegaanadaasiin ay la xitiirto sidii ay u damin lahaayeen xiisadaha Colaadeed ee ka taagan deegaanda Garileey iyo Daara salaam iyo weliba siidii loo qaadi lahaa jidgooyooyinka faraha badan ee loo dhiganayo gaadiidka soo gala kana baxa deegaandasi.
Col :ayaa intaa ku daray in kulamo iyo wada xaajood ay kula jiraan odayaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi sidii loo soo qaban lahaa kooxaha dhibaatada ka wada deegaanada.
Todobaadyadii laga soo gudbay ayaa waxaa soo baxayay cabashoyin ka soo yeeray Gaadiidleeyda iyo ganacsatada qaadka keenta deegaanadaasi oo la xirirta maleeshiyooyin fariisimo ka sameeystay deegaanadaasi oo laba jibaaray lacagihii ay ka qaadayeen.
SALAD XASAN CALI
This entry was posted on December 29, 2007 at 2:07 pm	and is filed under WARARKI UGU DANBEEYAY (The Latest Updated News). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.